warkii.com » Inter Milan Oo Ka Faa’iidaysanaysa Khilaafka Lionel Messi Iyo Barcelona – Qorshe Ay Kula Saxeexanayaan Leo Ayaa La Shaaciyey
Inter Milan Oo Ka Faa’iidaysanaysa Khilaafka Lionel Messi Iyo Barcelona – Qorshe Ay Kula Saxeexanayaan Leo Ayaa La Shaaciyey
Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa doonaysa inay ka faa’iidaysato khilaafka u dhexeeya Barcelona iyo kabtankeeda Lionel Messi, waxaanay qaadaysaa tallaabo ay isku dayayso inay ku hesho xiddiga reer Argentine.
Lionel Messi iyo Barcelona ayaa xili ciyaareedkan laba meelood oo kala fog jooga marka laga eego xidhiidhka maamulka iyo laacibkan, waxaanay kooxda Talyaanigu dedaal u geli doontaa inay ka faa’iidaysato muruggan oo ay qorshe qanciya Leo hor dhigto xagaaga dambe.
Heshiiska uu Lionel Messi kula jiro Barcelona ayaa ku eg dhamaadka xili ciyaareedka dhowaanta bilaabmi doona, waxaanu markaas kaddib xor u noqon doonaa inuu iskaga tago kooxda iyadoo aanay wax lacag ah ka heli doonin.
Sida uu qoray wargeyska Gazzetta dello Sport, Inter Milan ayaa lacago waalli ah oo uu mushahar u qaadan doono hor dhigaysa 33 xiddigan, si ay ugu qanciso inuu San Siro Stadium iska xaadiriyo, isla markaana ay Cristiano Ronaldo mar kale Talyaaniga ka wada bilaabaan xafiiltan.
Saamiileyaasha ugu badan mulkiyadda Inter Milan ee Sunning Group Holdings ayaa la rumaysan yahay inay diyaar la yihiin lacagta mushaharka ah ee uu Lionel Messi ku qanci karayo si uu San Siro u tago xagaaga dambe.
Wargeyska kale ee A Bola ee kasoo baxa waddanka Portugal ayaa isaguna carrabaabay tirada lacagta ay Inter Milan siin doonto iyo sannadaha ay doonayso inuu u ciyaaro.
A Bola waxa uu sheegay in Inter ay hor dhigtay Messi saddex sannadood oo heshiis ah, isla markaana uu sannad walba mushahar ugu qaadan doono £45.5 milyan oo Gini.